INgqungquthela ye-2019 yeCaribbean yoPhuhliso lwezoKhenketho oluZinzileyo ukugxila kumngcipheko wemozulu, eminye imiba ecinezelayo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Xanduva » INgqungquthela ye-2019 yeCaribbean yoPhuhliso lwezoKhenketho oluZinzileyo ukugxila kumngcipheko wemozulu, eminye imiba ecinezelayo
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Xanduva • ISaint Vincent kunye neGrenadines Breaking News • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Umbutho wezoKhenketho kwiCaribbean (i-CTO), ngokubambisana neSt. Vincent kunye neGrenadines Tourism Authority (SVGTA), bazakubonelela ngeqonga lommandla wokujongana neminye yemicimbi ecinezela kakhulu ejongene nokhenketho lweCaribbean kwinkomfa yenkulumbuso yengingqi ezinzileyo. uphuhliso lokhenketho ngo-Agasti.
Kwinkomfa yokuqala yezokhenketho eyayibanjelwe eSt. Vincent naseGrenadines (SVG), iNkomfa yeCaribbean ngo-2019 yoPhuhliso loKhenketho oluZinzileyo, eyaziwa ngokuba yiNkomfa yoKhenketho oluZinzileyo (# STC2019) icwangciselwe umhla wama-27- 29 Agasti Ihotele i-Beachcombers eSt. Vincent.
Phantsi komxholo othi 'Ukugcina ibhalansi eyiyo: uPhuhliso lwezoKhenketho kwiXesha leYantlukwano', iingcali zeshishini ziya kujongana nemfuno engxamisekileyo yemveliso yezokhenketho enenguqu, iphazamise kwaye ihlaziye ngokutsha ukuhlangabezana nemiceli mngeni ehlala isanda.
"Uqoqosho lweCaribbean lujamelene noxinzelelo olukhulu lokuphendula kwiinguqu ezichaphazela ishishini lezokhenketho kunye nezinto ezintsha ekufuneka zenziwe ukujongana nemicimbi engxamisekileyo enje ngobungozi bemozulu, ukunciphisa inkunkuma, ukubandakanyeka koluntu kunye nento ekuthiwa yi-intanethi yezinto," utshilo u-Amanda Charles, Ingcali yophuhliso lwezokhenketho lweCTO. "I-STC 2019 izakubaluleka ekuziseni imiba enefuthe kuzinzo lwexesha elizayo kunye nokukhula kokhenketho lweCaribbean."
I-St Vincent kunye ne-Grenadines ziya kubamba i-STC phakathi kwesizwe esomeleleyo esiya kwilizwe eliluhlaza, elinamandla okumelana nemozulu, kubandakanya nokwakhiwa kwesityalo se-geothermal eSt. Vincent ukuxhasa amandla elizwe kunye namandla elanga kunye nokubuyiselwa kwe-Ashton Lagoon Isiqithi somanyano.
Umphathi omkhulu we-SVGTA, u-Glen Beache uphawula ukubaluleka kokusindleka kwenkomfa ngexesha apho iZizwe eziManyeneyo zipeyinta umfanekiso ombi weenkqubo zenkxaso yobomi bendalo zomhlaba, kubandakanya ubomi baselwandle kunye nendalo.
"Isidingo seendawo zeCaribbean ukufumana iindlela zophuhliso ezixhomekeke kakhulu ekuzinziseni indawo kubalulekile kwaye ke kufuneka sinike ingqwalaselo kwindlela esiceba ngayo, esilawula ngayo kunye nentengiso yophuhliso lwezokhenketho lwethu," utshilo uBeache. “ISt. IVincent kunye neGrenadines kuyakuvuyela ukubamba i-STC 2019, ngexesha apho sifuna ukugcina imali eseleyo kunye nokugcina igama le-SVG njengendawo ekungafikelelwa kuyo ”.
Eyona nkxalabo iphambili kunye nokuphambili kwiCaribbean kunyanzelisa ukulungela ngakumbi kunye nokomelela kutshintsho lwemozulu. Okubaluleke ngokulinganayo lutshintsho kulwazi lwabathengi olufuna icandelo lokhenketho lommandla ukuba libe nobulumko ngakumbi ngokunxulumene nokucwangciswa kokhenketho nolawulo lwezixhobo.
Imilinganiselo yemimandla kunye nezona ndlela zibalaseleyo kukhenketho olusekwe eluntwini, ubuchwephesha bezemali kumashishini aphakathi, amancinci nasakhasayo, ukwenziwa kwezinto ezintsha kushishino kunye nokhuphiswano lwendawo oya kuyo ziya kugxila kwezi ntsuku zimbini zengxoxo. Abathathi-nxaxheba baya kuba namava osuku olupheleleyo lokhenketho lokufunda ukuze bazntywilisele kuluntu lwasekhaya.
Izithethi ziya kujongana neendlela zommandla onokuthi uphendule kwimiceli mngeni kunye namathuba aboniswe ngokwanda kokhuphiswano, ukutshintsha kweemfuno zabathengi kunye nokuthenga izinto ezikhethwa ziqhutywa ngamajelo eendaba ezentlalo kunye namaqonga onxibelelwano, uqoqosho lokwabelana, kunye neetekhnoloji zezezimali.
Iingcali ziya kuphonononga ukuba oku kungenziwa njani ngendlela eyonyusa ubomi basekhaya ngokwenziwa kwamava ezokhenketho amatsha, ahlukeneyo kunye namava okusebenzisa izinto zendalo kunye nezinto ezenziwe ngabantu baseCaribbean.